Xakamee Samsung Kies ee PC Gebi! .
Samsung shaki la'aan waa astaanta ah smartphone ugu caansan malaayiin macaamiisheeda dunida oo dhan ku faafay. Samsung leeyahay software lahaansho magaca Samsung Kies oo waxaa loogu tala galay si loo caawiyo dadka isticmaala Samsung ee geedi socodka wareejinta xogta iyo in la sameeyo hayaan xogta ay smartphone ee. Marka laga reebo in, Samsung Kies kaloo ka caawisaa dadka isticmaala si aad u cusboonaysiiso ama dhibta firmware qalabka ay Samsung 'haddii in ka badan updates hawada, sabab awoodin si ay u caawiyaan. Sababtaas darteed, waxaa lagama maarmaan ah user kasta oo Samsung ay leeyihiin aqoonta aasaasiga ah ee Samsung Kies. In this article waxaan ku baran doonnaa eegno laba nooc oo Samsung Kies; Kies 2.6 iyo 3. Marka aad gaadho dhamaadka qoraalkan, waxaad la yeelan doonaa:
1. faham bilow ah ee Samsung Kies oo ay ka shaqeynayaan.
2. faham ah farqiga u dhexeeya Kies 2.6 iyo 3.
3. aqoon Hoose ee hawlaha in la samayn karaa iyadoo la isticmaalayo Samsung Kies.
Samsung Kies 2.6 waa version of Kies taageera ka weyn casriga ah Samsung. Waxaa aasaas ahaan waa software ah oo xog wareejinta awoodda la kordhiyay si ay kor firmware qalab Samsung ah oo lagu xallinayo arrintan wax la xiriira firmware ah. Samsung Kies 2.6 kale oo uu leeyahay "nidaameed" shaqeynta la isticmaalayo, taas oo aad u hagaagsan karo xogta guud ahaan xisaab email kala duwan iyo qalabka aad adiga oo isticmaaleya isticmaale laptop ama desktop. Samsung Kies 2.6, steup rasmi ah oo ay nafteeda Samsung lagala soo bixi karaa halkan . Waa software toos ah la user saaxiibtinimo interface in xitaa laylis ugu isticmaala baran karaan si ay u yaqaaniin wax waqti ah gudahood oo dhan. Inkastoo casriga ah ka weyn Samsung ayaa noqotay huriye badan waqtiba waqtiga, dadka isticmaala qaar ka mid ah ay weli u qalabka ka weyn in ay u isticmaalaan. Kies 2.6, waa xalka ugu fiican dhibaato kasta oo la xidhiidha dhammaan qalabka Samsung oo kale.
Samsung Kies 2.6 taageertaa dhammaan qalabka Samsung in la sii daayay ka hor September 2013. Taas oo ka dhigan tahay in ay taageerto qalabka in ay maamulaan version Android 4.3 ee hoose in.
Samsung Kies 2.6 waa la jaan qaada Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, iyo Windows 8 socda nidaam la Intel Pentium 1.8 GHz ama ka weyn. Ugu yaraan 500MB ah meel drive adag ayaa loo baahan yahay si loo soo dajiyo Samsung Kies 2.6 on nidaamka. Samsung Kies 2.6 baahan yahay Microsoft .net Framwork v3.5 SP1 ama ka dib, Windows Media Player 11 ama ka dib DirectX v9.0 ama ka dib si fiican u shaqeyo.
Si aad wax badan oo ku saabsan ka akhriso Samsung Kies 2.6 iyo si aad u hesho faahfaahsan Kies 2.6 tutorial ku saabsan sida loo isticmaalo. Macluumaadka ay bixisay link siiyey waa kugu filan si aad aad wax u kastaan ​​shaqaynta Samsung Kies 2.6 wax waqti ah gudahood oo dhan.
Version ugu dambaysay ee Samsung Kies waa la jaan qaada oo dhan qalabka ugu danbeeyay ee ay Samsung id Kies 3. Sidoo kale waa software ah kala iibsiga file sida Kies 2.6 iyo qabtaan shaqo isku mid ah in dayactir kooban oo dhib firmware qalab ah. Kies 2.6 iyo 3 muhiimad waa wax la mid ah, inkastoo farqiga u yar in qalabka taageerada hore ka weyn Samsun halka loogu talagalay ka dib ee baahida qalabka Samsung Galaxu dambeeyay. Kies 3 ka kooban yahay laba version; version ah Windows taageeray oo lagala soo bixi karaa halkan iyo version ah oo ay taageerayaan nidaamka ka hawlgala Mac kaas oo lagala soo bixi karaa halkan .
Kies 3 taageertaa dhammaan qalabka Samsung in ordi Android version 4.3 iyo wax ka sareeya. Tani waxay la jaan qaada qalabka Samsung Galaxy ugu dambeeyey oo dhan.
Samsung Kies 3 waa la jaan qaada Windows XP (SP3), Windows 7 iyo Windows 8 socda nidaam la Intel Core i5 3.0 GHz ama ka sare. Ugu yaraan 200MB ah meel drive adag ayaa loo baahan yahay si loo soo dajiyo Samsung Kies 2.6 on nidaamka. Samsung Kies 3 baahan tahay warbaahinta Windows Player 11 ama ka sare Windows XP iyo Windows Media Pack Feature for Windows 7, 8 OS N, Kn si fiican u shaqeyo.
Kies 3 ka muhiimsan si ay u bartaan iyagoo ka eegaya dhinaca user ee maxaa yeelay in badan oo ka mid ah maanta users Samsung leeyihiin casriga ah ay leeyihiin jiilka ugu dambeeyay ee qalabka Android soo saaray Samsung. Sidaa darteed, in badan oo ku saabsan Samsung Kies 3 iyo isticmaalka, madaxa on inay Kies 3 hage .
Talooyin iyo bixin:
1. Had iyo jeer ka soo dejisan ee software Samsung Kies ka website-ka Samsung. Software xiridda ka websites xisbiga saddexaad har si xun u dhaawici kartaa your computer iyadoo ay jirto had iyo jeer waa wax macquul ah in software sida ayaa lagu daray.
2. Haddii qalab aad waxaa ku adag tahay xidhiidhinaya Samsunf Kies, madaxa isagoo Samsung Kies iyo in la hubiyo in aad isticmaasho version saxda ah ee Kies. Haddii aan, waxay isticmaalaan website la mid ah si ay u soo bixi version loo baahan yahay ee Kies aad telefoonka smart.
> Resource > Windows > Gebi Xakamee Samsung Kies ee PC!